नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विजयी वडा अध्यक्ष राम नरेश महतोको काका ५५ वर्षीय रामविलास महतोलाई नेकपाको कार्यकर्ताहरुले गोली हानी हत्या
कात्र्तिक १३, २०७५
सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ को रामनगर गाउँपालिका वडा नं. ४ का नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विजयी वडा अध्यक्ष राम नरेश महतोको काका ५५ वर्षीय रामविलास महतोलाई नेकपाको कार्यकर्ताहरुले गोली हानी हत्या गरेका छन् । रामविलास महतोको मुख र पेटमा गोली लागी घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । नेकपाका कार्यकर्ताहरुले एक्कासी कुटपिट र गोली चलाएका थिए ।
गोली लागेर सोही वडाका नेपाली कांग्रेसका महादेव राय, विवेक महतो, प्रमोद सहनी, भोजेन्द्र महतो, श्रीनारायण महतो, प्रेमनारायण महतो, मुकेशकुमार कुशवाहा गम्भीर घाइते हुनु भएको छ । घाइते लिन गएको एम्बुलेन्स माथि समेत नेकपाका कार्यकर्ताहरुले तोडफोड गरेर उपचारमा लैजान समेत समस्या उत्पन्न गरेका थिए । नेकपाका कार्यकर्ताहरुले वडा अध्यक्ष महतोको घर सहित वरपरका अन्य घरमा समेत क्षति पु¥याएका छन् ।
हिजो सोही वडाका निर्वाचित वडा अध्यक्ष रामनरेश महतो दिउँसो १ बजे कार्यालय जाने क्रममा नेकपाका कार्यकर्ताले सांघातिक आक्रमण गरेर दुवै खुट्टा भाँचिदिएको र टाउँको फुटाइदिएका थिए । टाउँकोमा गम्भीर चोट लागेका कारण उपचारका क्रममा उहाँको टाउँकोमा १० वटा टाँका लगाइएको छ ।
अघिल्लो दिन वडाध्यक्षलाई कुटपिट गरिएको र त्यसको भोलिपल्ट उनकै घरमा आक्रमण गरेर गोली हानिएको छ । घट्ना घट्न सक्ने सम्भावना रहेको तर्फ नेकपाको डर, त्रासका आधारमा प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा दिन नसक्नु अत्यन्त दुःखद विषय हो ।
यस घटनालाई नेपाली कांग्रेसले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छ । साथै, यस्ता घटना भविष्यमा पुनः नदोहो¥याउन नेपाली कांग्रेस नेकपालाई चेतावनी समेत दिन चाहन्छ । मृतकलाई शहीद घोषणा गर्न, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्न तथा घटनामा संलग्न अपराधीहरुलाई कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारसँग माग गर्दछ ।
पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन सहित उपसभापति श्री विमलेन्द्र निधि भोलि विहान सर्लाही जाने कार्यक्रम रहेको छ ।